Anjely alin-kisa no vonona hanampy
"Ary nahita aho sady nandre feon'anjely maro manodidina ny seza fiandrianana (...) ary ny isany dia alinalina sy arivoarivo" - Apok. 5:11
Raha niakatra tany amin'ny Ray i Kristy dia tsy namela ny mpanara-dia Azy ho irery. Nirahiny ny Fanahy Masina, amin'ny maha-solontenany Azy, sy ny anjelin'ny lanitra, amin'ny maha-fanahy manompo azy ireo, mba hanampy ireo izay misedra zava-tsarotra eo amin'ny fiadiana ny ady tsaran'ny finoana. Tsarovy mandrakariva fa manampy anao i Jesôsy. Tsy misy mahatakatra tsara noho Izy ny tsipirian'ny toetranao. Mitsinjo anao Izy, ary raha mety hotarihiny ianao, dia hanamboatra ny toe-javatra manodidina anao Izy mba hahasoa sy hanampy anao hahatanteraka ny fikasany rehetra ho anao. MYP, 17. Tsy misy fanahy izay toa malemy indrindra, kanefa raha ny tena marina dia ny tsy azo resena indrindra, noho izay mahatsapa ny maha-tsinontsinona azy ka miankina tanteraka amin'ny fahamendrehan'ny Mpamonjy. Vonona haniraka ny anjeliny rehetra any an-danitra Andriamanitra mba hanampy ny olona tahaka izany ka tsy havelany ho resy izy. Irak'Andriamanitra ny anjely, izay mamirapiratra noho ny fahazavana mitosaka tsy ankiato avy amin'ny fanatrehany ary manana elatra hanidinana faingana mba hanatanteraka ny sitrapony. — PP, 34
Eo amin'izay ilana azy indrindra mandrakariva ny anjely. Eo anilan'ireo izay miatrika ny ady sarotra indrindra amin'ny izaho izy ireo, sy eo anilan'izay voahodidin'ny toe-javatra mahakivy indrindra. — DA, 440
Hatrizay hatrizay dia teo anilan'ireo mpanara-dia mahatoky an'i Kristy ny anjely. Mifarimbona ny andian'anjely ratsy maro mba hamely ireo rehetra izay handresy. Mitaona antsika anefa i Kristy mba hibanjina izay tsy hits, dia ireo tafiky ny lanitra izay mitoby manodidina ireo tia an'Andriamanitra, mba hanavotra azy. Tamin'ny loza maro, na hitantsika na tsy hitantsika, no niarovana antsika tamin'ny alalan'ny fidiran'ny anjely an-tsehatra. Tsy ho fantatsika izany ambara-pahitantsika ny fitantanan'Andriamanitra ao amin'ny fahazavan'ny mandrakizay. Amin'izay dia ho fantatsika fa ny fianakavian'ny lanitra manontolo no liana amin'ny olombelona eto an-tany. Ary ireo iraka avy eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra no nanaraka antsika isaky ny indray mandingana, isan'andro isan'andro. — DA, 240